VIDEO: SRK Oo Bilaabay Olole Cusub, Wuxuu Noqday Kabalyeeri, Qaabka Uu Uga Yaabsaday Qoyskiisa Iyo Jamaahiirtiisa - Hablaha Media Network
VIDEO: SRK Oo Bilaabay Olole Cusub, Wuxuu Noqday Kabalyeeri, Qaabka Uu Uga Yaabsaday Qoyskiisa Iyo Jamaahiirtiisa
HMN:- Shah Rukh Khan, wuxuu si shaqsi ah xiriir wanaagsan ula leeyahay reer Dubai muddo dheerna xiriirkaani mid soo jiray ayuu ahaa, dhowaan wuxuu kusoo duubay ololihiisa cusub ee #BeMyGuest.
Muuqaalkaan ayaa waxaa lagu arkayaa Shah Rukh Khan, oo booqanaya goobaha uu ugu jecel yahay magaalada Dubai, wuxuuna qabanayaa shaqooyin aan looga baran iyadoo ujeedkiisu yahay inuu si lama filaan ah uga yaabsado taageereyaashiisa.
SRK ayaa waxaa inta lagu jiro muuqaalkaan seddaxda daqiiqo ah aad ku arki doontaa isagoo ka yaabsanaya taageereyaal badan kuwaasoo aan marnaba rumeysan doonin in shaqsiga la taagan uu yahay King Khan.
Sidoo kale SRK wuxuu noqonayaa kabalyeeri isagoo cunno usoo qaadaya qoyskiisa. Dabcan waa wax jilliin uu ku jiro waana sheeko qoran.
Laakiin si kasta oo ay ahaato muuqaalkaani waa mid la jecleysan doono isla markaana uu ku qosli doono taageere kasta oo SRK ah…. Ujeedkuna waa ololihiisa cusub ee #BeMyGuest.
HALKAAN HOOSE KA DAAWO MUUQAALKAAS: